တောင်ဒဂုံဗန္ဓုလအငှားအိမ်ရာတွင် ခိုင်ခံ့မှုမရှိသည့်တိုက်အချို့ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရမည်၊ တို?? - Yangon Media Group
တောင်ဒဂုံဗန္ဓုလအငှားအိမ်ရာတွင် ခိုင်ခံ့မှုမရှိသည့်တိုက်အချို့ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရမည်၊ တို??
ရန်ကုန်၊ မေ ၅-တောင်ဒဂုံမြို့နယ် တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် ဗန္ဓုလ အငှားအိမ်ရာတွင် တိုက်အလုံး ၅ဝ တည်ဆောက်ထားသည့်အနက်ခိုင် ခံ့မှုအားနည်းသည့် တိုက် ၁ဝ လုံး ကို ပြန်လည်ပြုပြင်နေရာ တစ်လုံး မှာ ပြုပြင်မရတော့သည့်အနေအ ထားဖြစ်နေခြင်းကြောင့် လူနေထိုင် မှုမရှိသောတိုက်အဖြစ် ချန်လှပ်ထား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအငှားအိမ်ရာကို မြို့ပြ နှင့်အိမ်ရာဖွံဖြိုးမှုဦးစီးဌာနပိုင်မြေ တွင် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေ သကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တိုင်းအစိုးရ အဖွဲ့တို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ ပြန် လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သော တိုက် ၁ဝ လုံးကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပြုပြင်နေသော တိုက် ၁ဝ လုံးအနက် တစ်လုံးမှာပြုပြင် မရတော့သည့်အနေအထားဖြစ် ၍ လူနေထိုင်မှုမရှိသောတိုက်အ ဖြစ် ချန်လှပ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း တောင်ဒဂုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အ မှတ် (၁) မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးညီညီက မေ ၅ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
‘အဲဒီတိုက် ၁ဝ လုံးက ပြန် လည်ပြုပြင်နေတာကြောင့် လူနေ ထိုင်မှုမရှိသေးပါဘူး။ ကျန်တဲ့ တိုက်တွေတော့ လူနေထိုင်မှုရှိပါ တယ်။ အဲဒီ ၁ဝ လုံးထဲမှာ တစ်လုံး က ဘယ်လိုမှပြုပြင်မရတော့တဲ့ အခြေအနေမှာရှိနေတာကြောင့် လူနေထိုင်မှုကို ချန်လှပ်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ဒီတိုက်ကိုဖြိုမယ်၊ ပြင်မယ်၊ ဘာ ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ် ချက်မကျသေးပါဘူး။ ပြင်လို့ရတဲ့ ကျန်တဲ့တိုက် ကိုးလုံးကို အမြန်ဆုံးပြု ပြင်ပြီးတော့ လူနေထိုင်ခွင့်ပေးနိုင် ဖို့ ကြိုးပမ်းနေပါတယ်”ဟု ¤င်း က ပြောသည်။
လက်ရှိဗန္ဓုလ အငှားအိမ် ရာအတွင်း တိုက်အလုံး ၅ဝ တွင် လူနေထိုင်ရန် ခွင့်မပြုသေးသည့် တိုက် ၁ဝ လုံးရှိကြောင်း သိရသည်။
အငှားအိမ်ရာတွင် နေထိုင်ရန် မဲပေါက်ထားသော်လည်း တစ်နှစ် ကျော်ကြာလာသည်အထိ နေခွင့် မရသေးသောကြောင့် အခက်အခဲ အများအပြားရှိကြောင်း တိုက်ခန်း မဲပေါက်ထားသူအချို့က ပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုက် ခန်းမဲပေါက်ထားသော်လည်း နေ ထိုင်ခွင့်မရသေးသည့် ဒေါ်ဝေက ”မဲပေါက်ထားတဲ့တိုက်ခန်းမှာ မ နေရသေးသလို၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုး ရအဖွဲ့တွေကို သွားရောက်မေးမြန်း ပေမယ့် တိကျတဲ့ဖြေရှင်းပေးတာ မျိုးမရှိဘူး”ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါအငှားအိမ်ရာများ ကို ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ ၂၆ ခုက တာ ဝန်ယူတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယ ခုကဲ့သို့ ပျက်စီးမှုများကြောင့် ကုမ္ပဏီ ငါးခုကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအ ဖွဲ့က အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထား ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ အမည်ပျက်စာရင်းသွင်း ထားသည့်ကုမ္ပဏီအချို့သည် အ ခြားကုမ္ပဏီအမည်များသို့ ပြောင်း လဲလုပ်ဆောင်နေမှုများကြောင့် ယင်းအခြေအနေများကို ထိန်းချုပ် နိုင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ဦးညီညီ ပြောသည်။
အဆိုပါ အငှားအိမ်ရာသည် အကျယ်အဝန်း ၁၂ ဒသမ ၅၃၄ ဧကကျယ်ဝန်းပြီး အလျား ၁၅၃ ပေ၊ အနံ ၂၅ ပေရှိသည့် ခြောက်ခန်းတွဲ တိုက်အိမ်ရာအလုံးပေါင်း ၅ဝ ကို တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အိမ်ရာများကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလက တည်ဆောက်ရန် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး အငှားအိမ်ရာတွင် နေထိုင်ခွင့်ရရှိသူများသည် တစ် လလျှင် ကျပ်သုံးသောင်းပေးဆောင် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း တစ်ဆင့်ပြန်လည် ရောင်းချခွင့် ငှားရမ်းခွင့်မရှိဘဲ ငါးနှစ် နေထိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ပြည်သူအသက်ကယ်သူမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စွမ်းရည်သတ္တိဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုများချီးမြှင့်ခံ?
အသင်းမှ ထွက်ခွာမည့်သူများတွင် မိမိမပါဝင်ဟု အသင်းနည်းပြဆီမြွန်နီ ပြောဆို
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် ‘သန်းပေါင်းများစွာသော ဦးနေဝင်းများ မြန်မာပြည်တွင် ရှိသေးတယ် သိ??
ဂျပန်တွင်ပြင်းအား အဆင့် ၅ ဒသမ ၈ ငလျင် လှုပ်ခတ် သုံးဦး ဒဏ်ရာရ၊ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှု မသိရသေး